Soo ogow 6 timo waji oo gu'gan loogu talagalay | Bezzia
Susana Garcia | 29/04/2021 20:00 | Quruxda, Daaweynta quruxda
El daryeelka timaha waa aasaasi in ay tahay inaan xisaabtano maalin walba. Had iyo jeer waa inaad isticmaashaa alaabo wanaagsan laakiin waxaan sidoo kale isticmaali karnaa waji-shareerka weyn ee timaha waqti ka waqti, maxaa yeelay habkaas waxaan ku dari doonnaa xoogaa daryeel dheeri ah timaheena. Gugan waxaan yeelan karnaa timo qoyan oo qurux badan, dhalaalaya oo caafimaad qaba haddii aan isticmaalno waji-u-waji ku habboon timaheena.
ka maaskarada timuhu waxay timahaaga ka dhigayaan kuwo hagaagsan oo dooranaya waxyaabaha ay ka kooban yihiin Waxaan markaa ku xisaabtami karnaa kuwa ugu fiican nooca timaheena. Maaskarada dabiiciga ah ee aan ku sameyn karno guriga waa kuwo fiican, maxaa yeelay waxaan isticmaalnaa waxyaabo dabiici ah isla mar ahaantaana waxaan ku daryeelnaa timaha waxyaabo fudud.
1 Maaskaro timo oo cadho leh
2 Maaskarada timaha loogu talagalay timaha qalalan
3 Maaskaro timo saliid leh
4 Maaskaro timaha wanaagsan
5 Maaskaro timo oo caajis ah
6 Maaskaro timo midab leh
Maaskaro timo oo cadho leh
El timaha xiirta badanaa waxay leeyihiin dhibaatada qallaylka, sidaas darteed waxa ugu weyn ee kiiskan waa in la nafaqeeyo timaha. Avokado badanaa waa qayb weyn oo loogu talagalay kiiskan. Marka waa inaan helnaa avokado bisil oo aan ku shiidi karno timaha. Avokado-kan waxaa lagu qasi karaa saytuun ama saliid yicib oo aad u qoyan si looga takhaluso barafka. Ka dib markii la marsado maaskaro waa inaan timaha ku maydhnaa shaambo wanaagsan laakiin waxaan arki doonaa sida jahwareerku u baaba'o haddii uu si fiican u biyo qabo.
Maaskarada timaha loogu talagalay timaha qalalan
Timo qallalan ayaa sidoo kale noqon kara ka faa'iideyso maaddooyinka bixiya fuuq-baxa weyn. Saliidda qumbaha isku dhafan iyo ukunta cad ayaa ku habboon. Saliida qumbaha waa mid aad u qoyan ugxaanta cadna way fududahay laakiin waxay ka caawineysaa inay timuhu qoyaan, si aakhirka timuhu u nafaqeeyaan una istaagaan inay qalalaan.
Maaskaro timo saliid leh
Maaskarada guryaha lagu sameeyo ee loogu talagalay timaha saliida leh badanaa marwalba isticmaal liin dhanaan, maaddaama ay leedahay awood astringent sare. Waxaad ku dhex qasan kartaa liinta ukunta cad, taas oo ah walax iftiin leh oo dhalaalaysa. Timaha saliida leh ma isticmaali karno waxyaabaha bixiya dufanka badan sida saliida saytuunka, laakiin sidoo kale waxaa lagu qasi karaa caano fadhi ah oo biyo siiya laakiin aan dufan lahayn. Samee maaskaro oo tag nus saac. Timaha markaa waa in si joogto ah loo dhaqo. Liinta ayaa ka caawisa nidaaminta soosaarka dufanka si fudud.
Maaskaro timaha wanaagsan
ka strawberries waa qayb kaamil ah timaha aan lahayn awood. Maaskarada loogu talagalay timaha wanaagsan waa inay bixiyaan xoog iyo mug. Isticmaal strawberries la jajabiyey si aad u sameysatid xabag aan ku darno galley. Strawberries waxay ku dartaa xoog timaha burkuna wuxuu ku daraa mug.
Maaskaro timo oo caajis ah
El timo caajis ah ayaa qallalan oo kacsan, maadaama wax walba ay ku xiran yihiin fiber ka laga yaabo inuu xumaado. Waa muhiim inaad nafaqeyso oo jilciso timahaaga alaabada ka caawineysa inay sifiican u ekaadaan. Si timuhu u dhalaalaan waa inaan ku darnaa ukun jaallo ah maaskaro. Ukuntu waxay caawisaa helitaanka dhalaal badan oo kujira fiber-ka timaha. Dhinaca kale, waxaan ku qasmi karnaa ukunta ukunta yogurt, maadaama yogurtu ay aad u nafaqo badan tahay timaha waxayna ka caawineysaa inay sii ilaaliso fuuq-baxa. Intaas waxaa sii dheer, waa laba walxood oo si fudud jikada looga heli karo oo aad isugu dhafan si loogu mariyo timaha.
Maaskaro timo midab leh
Timaha midabka leh ayaa leh dhibaatada weyn ee ah inay qalalan tahay mararka qaarkoodna ay waxyeelo gaarto. Ku saliida saytuunka waa qayb weyn iyo waliba walxaha dabiiciga ah uma janjeeraan inay soo jiidaan midabka. Waad ku dari kartaa xoogaa jaallo ah si aad timaha u nafaqeyso ugana dhigto mid dhalaalaya oo jilicsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » 6 waji daboolan timaha guga